Kun Habeen Iyo Habeen - Wikipedia
Kun Habeen Iyo Habeen (Af-Carabi: ألف ليلة وليلة, Af-Ingiriis: Arabian Nights, ama One Thousand and One Nights) waa qaybo badan oo kala duwan oo Sheekooyin shacbiyadeed ah.waa ilaa 200 oo qiso oo gabayana ay kujiraan.Kun habeen iyo habeen waxa lasheegaa in ay tahay qiso aad iyo aad u da wayn laakiin taariikhda casriga ah ee ay gaadhay caalamku waa qarniyadii dhaxe kadib markii qoraagii Faransiiska ahaa ee looyaqaanay Antoine Galland uu Afka Faransiiska ku turjumay.Qisooyinka Kunhabeen iyo Habeen waxa loo isticmaalay aad iyo aad gaar ahaan waxaa laga qoray buug badan oo kuwa ciyaalka ah waxa kale oo laga sameeyaya Aflaam.
Laakiin marka la eego Dhabahaan xiliga aytimi qisadani iyo sid ay kutimi may ahayn sidan ay hada inagusoo gaadhay.laakiin waxa ay soomartay marxalado marba waxaa lagusoo daray qayb.waxa ay qaadatay wakhti aad iyo aad u dheer.
Hal maalin iyo hal habeen (Carabi: ألف ليلة وليلة, translation) 'Fadlan wa-layla) waa aruurinta qowmiyadaha bariga dhexe ee loo yaqaan' Arabic Arabs Age of Islamic Age. Waxaa badanaa lagu yaqaanaa Ingiriisi ahaan Habeenka Carbeed, daabacaaddii ugu horreysay ee Ingiriisiga ah (1706), taas oo horseeday cinwaanka 'Entertainment Night Meights'
Shaqada waxaa laga soo ururiyay qarniyo badan oo kala duwan, qorayaal kala duwan, tarjumayaal, iyo aqoonyahanno ku baahsan Galbeedka, Bartamaha, iyo Koonfurta Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. Talooyinka qudhoodu waxay isku dayaan inay xididadooda ku soo celiyaan carabiga, Giriigga, Hindi, Yuhuudda, Faaris iyo Turki Riwaayadda iyo suugaanta. Gaar ahaan, sheekooyin badani waxay ahaayeen sheekooyinka dadka asal ahaan ka soo jeeda Abbasid, halka kuwa kale, gaar ahaan sheekada shaxda, waxaa laga yaabaa in laga soo qaato shaqada Parsiliga ee Farsiga Hezār Afsān (Faaris: هزار افسان, lit. A Thousand Tales) wuxuu qayb ahaan ku tiirsanaa qaybaha Hindida.
Waa maxay caan ku ah dhamaan qeybaha kala duwan ee Nuuxku waa sheekadii ugu horreysay ee taliyaha Shahrullah iyo xaaskiisa Scheherazade iyo qalabkii feylka ahaa ee lagu dhex darey qorraxda oo dhan. Sheekadu waxay ka socotaa sheekadan asalka ah; Qaar ka mid ah ayaa ku jira talooyin kale, halka kuwo kale ay bilaabaan oo ay ku dhammaanayaan heshiiskooda. Qaar ka mid ah daabacaadyada waxaa ku jira dhowr boqol oo habeen ah, halka qaar kalena ay ku jiraan 1,001 ama in ka badan. Inta badan qoraalka ayaa ah qadar, inkastoo aaytani marmarka qaarkood loo isticmaalo heesaha iyo riddada iyo in lagu muujiyo dareen kacsan. Qaar badan oo ka mid ah gabayada waa hal xidhmo ama miisaan, laakiin inkastoo qaar ka mid ah ay sii dheeraanayaan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kun_Habeen_Iyo_Habeen&oldid=188098"
Last edited on 19 Diseembar 2018, at 15:44